🥇 ▷ Cusboonaysiinta ugu dambeysa ee shirkadda firmware-ka ayaa gabi ahaanba meesha ka saaraysa shaqadii baajinta ee AirPods… ✅
Cusboonaysiinta ugu dambeysa ee shirkadda firmware-ka ayaa gabi ahaanba meesha ka saaraysa shaqadii baajinta ee AirPods…
Haddii aad leedahay AirPods Pro, waxaa laga yaabaa inaad ogaatay in casriyeynta ugu dambeysa ay burburineyso astaamaha kansal gareeya ee telefishankaaga qaaliga ah. Danbi? Cusboonaysiinta ugu dambeysa ee firmware-ka, oo umuuqata in uu fiicnaaday soo saarida codka iyadoo saameyn xun ku leh baajinta dhawaaqaaga qiimaha badan.
Waxaan ula jeedaa, haddii aad rabto dhawaqa mediocre adigoon baajin codka, waxaad iibsaneysaa AirPods caadi ah marka hore, sax?
Haddii aad leedahay AirPods Pro, Apple kaliya waxay xallisay buuqdeeda
Apple Waxay soo saartey casriyeynti ugu dambeysay (2C54) ka dib markii isticmaaleyaashu bilaabeen inay ka cawdaan in Dayactirkooda AirPods Pro Active Noise Canceling (ANC). Haddii lammaanahaagu dib loo cusbooneysiiyay, waxaad kaliya u baahan tahay inaad iska sii jirto ilaa Apple Push firmware kaas oo xallinaya dhibaatadan, ma jirto hab dib loogu laabto noocii hore.
Dhibaatada ugu weyni waxay tahay in baajinta dhawaaqa ee soo noqnoqshadaha hoose ay si weyn hoos u dhacdo. Taas micnaheedu waa in ilaha ugu weyn ee dhawaqa safarkaaga aan loo hor istaagi doonin sidii hore, sida dhawaqa tareenka ama basaska.
Waad hubin kartaa nooca firmware-ka ee AirPod-kaaga adiga oo ku xiraya iPhone-kaaga, furaya Settings, u wareejinaya qeybta guud isla markaana aad riixeyso. Laga soo bilaabo halkaas, u dhaqaaq hoos ilaa aad ka aragto magacaaga ‘AirPod’. Taabashada qaybtaasi waxay tusi doontaa nooca firmware-kaaga hadda jira.
Waxaan rajeyneynaa Apple waxay xallin doontaa dhibaatadan oo waxay hubin doontaa cusboonaysiinta qalabka cusub ee firmware si dhakhso leh. Waxaa laga yaabaa in casriyeynta mustaqbalka ay ka mid noqon karto awoodda aad ugu beddesho ANC sida aad u jeceshahay, oo leh darajooyin kala duwan oo xoog ah oo ka shaqeeya ANC ee otomaatig u jira.
Maxay kula tahay Ma cusbooneysiisay barnaamijkaaga ‘AirPod Pro’? Weligaa ma aragtay farqiga u dhexeeya? Nala soo socodsii faallada hoose ama noo soo dir dooddeenna Twitter ama Facebook.
Waxaan rajaynayaa inaan arko dad badan oo adeegsanaya Apple AirPods goor dhow
Faallooyinka: Tivoli Audio Fonico Qalabka Wireless Bluetooth ee Wireless True
Master & Dynamic kaliya wuxuu bartilmaameedsadaa buuqa AirPods
Apple wuxuu u sheegayaa AG Barr inuu ku Dhaco Dhagaxa Codsigiisa ah in lagu furo Furinta Pensacola ee iPhone